Kooxaha Dekedda, Iyo Gaadiidka Oo Kala Qeyb Saday Abaal Marinada Bishii May Ee Horyaalka Soomaliya
Sunday, May 27th, 2018 - 18:51:31
Friday June 16, 2017 - 09:54:00 in Wararka by Kubad Bile
webka Kubadbile waxa ay idin soo bandhigaysaa qaabkii loogu kala guleystay abaal marinada bisha May ee horyaalka Soomaliya kol ciyaareedka 2016-2017.
Kooxda Dekedda ayaa labo ka mid ah abaal marinada jeebka ku ridatay,iyadoo hanatay goolka bisha May iyo Macalika bisha,iyagoo ku garaacay kooxaha ay sida wanaagsan u xifaaltamaan.
Leeliyaha kooxda Dekedda Yuusuf Cali Nuur (Yuu Cali) ayaa hantay abaal marinta macalinka bisha May ee horaalka Soomaliya,isagoo ka qaaday abaal marintan macalinka ay xagaagan sida weyn u xifaal tamayaan Robert Mayanga ee hogaamiyo kooxda Elman.
Tababare Yuu Cali ayaa 30-October 2016 la wareegay talada tababarinimo ee kooxda Dekedda,isagoo kala wareegay macalin Cabdi Weli Maxamed Maxamud (Cabdi Joon) oo xgaagii hore kooxda Dekedda kula dhameysatay booska 2-aad ee kala sareynta horyaalka soomaliya.
Macalin Yuu Cali 14-kulan oo hogaamiyay kooxda Dekedda horyaalka Soomaliya kol ciyaareedkan waxa uu qasaaray 1-kulan waxuuna kala kulamay 21-02-2017 kooxda Horsreed kulan ciyaareed Dekedda lagu dharbaaxay 2-1.
Kooxda uu hogaamiyo Yuu Cali ee Dekedda ayaa labo kulan ciyaartay bisha May horyaalka kooxdiisa waxa ay 2-0 ku dharbaaxday kooxda Heegan,halka kulankii labaad ay barbaro 1-1 la gashay Horseed.
Laacibka Qadka dhexe ee kooxda Dekedda C/Kariim C/lla Max’ed (Qubaaye) ayaa iskagana ku guleystay goolka bisha May ee horyaalka Soomaliy,isagoo sidoo kale 3-kulan ugu dambeesay shabaqa gaaray Qubaaye ayaa gool xirfadaysan ka dhaliyay shabaqa ilaaliyaha kooxda Horseed ee u dhashay dalka Kenya Ondori Victory, xili labada koox ay ku kala baxeyn barbar 1-1.
Wiilka soo jiitay jamaahiirta kooxda Gaadiidka ee ka ciyaara qalbada dhexe una dhashay dalka Nigeria Olivier Ogbonnaya Sunday ayaa isagana hantiy laacibkii ugu fiicnaa bisha May horyaalka Soomaliya, ka dib markii ay kooxdiisa dharbaaxaday kooxaha Muqdisho United iyo Elman
Olivier ayaa labadii kulan u dambeesay kaalin weyn ka qaatay kooxdiisa Gaadiidka waxa uu 2-gool ka dhaliyay kooxda Muqidsho United,halka kooxda Elman uu ka dhaliyay 1-gool,isagoo dhanka kale sameeyay 3-caawin.